Dutchtown, St. Louis, MO • DutchtownSTL.org တွင်စျေးဆိုင်
Dutchtown နေရာများ: စျေးဆိုင်
Arcades စျေးကွက် ရောင်းချရန်အတွက် arcade ဂိမ်း 200 ကျော်ပါရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ Ms.Pacman, Galaga, Donkey Kong, NBA Jam, Defender စသဖြင့် arcade ဂိမ်းများကိုအထူးပြုသည်။
4664 အက်စ်က Grand Blvd.
Arcades Market နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Callisto ရုပ်ပြနှင့်ပုံပြင်များ သူတို့၏နိမ့်ကျသောဗာဂျီးနီးယားရိပ်သာလမ်းစတိုးဆိုင်မှအသစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားသောရုပ်ပြစာအုပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုများကိုရွေးချယ်ထားပါသည်။ လစဉ်၏ပထမဆုံးစနေနေ့တွင်၎င်းတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအထူးလျှော့စျေးများနှင့်ရှင်းလင်းခြင်းရောင်းအားများကိုပေးသည်။
အစိမ်းရောင်ကမ္ဘာမြေအနုပညာကုမ္ပဏီ လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလှဆင်အနုပညာကိုဘိလပ်မြေနှင့်ကွန်ကရစ်မှပြုလုပ်သည်။ သူတို့သည်ကျောက်ဆောင်များ၊ ကျောက်ခဲများနှင့်အခြားကြီးမားသောအိမ်နှင့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းပေးသည်။
314-435-9194 • မင်္ဂလာပါ
Green Earth အနုပညာကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Logan ၏ကလေးများပြန်လည်ရောင်းချခြင်း ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အသစ်နှင့်အသုံးပြုသောအဝတ်အစားများကိုရောင်းချသည်။ သူတို့သည်ကလေးများအတွက်တွန်းလှည်းများ၊ စားခွက်များ၊ ကားထိုင်ခုံများနှင့်အခြားအရာများအတွက်အခြားအိမ်ထောင်စုလိုအပ်ချက်များကိုလည်းသယ်ဆောင်သည်။ Dutchtown Downtown ရှိ Logan's Kids Resale မှမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှာဖွေပါ။
3141 Meramec စိန့်
Logan's Kids Resale အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
Melanin Made Beauty သည် Downtown Dutchtown ရှိအလှအပနှင့်ဆံပင်ထုတ်ကုန်များအပြင်အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများ၏ဖက်ရှင်များကိုပါရောင်းချပေးသည်။
3318 Meramec စိန့်
Merb ရဲ့သကြားလုံး ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ ချောကလက်များနှင့်အခြားစားသောက်ဆိုင်များကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ သူတို့သည်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ချောကလက်ဖုံးလွှမ်းထားသောစတော်ဘယ်ရီနှင့် Bionic ပန်းသီးတို့ကြောင့်ထင်ရှားသည်။
4000 အက်စ်က Grand Blvd.
Mesa မူလစာမျက်နှာ ၁၉၀၊ ၈၀၊ ၉၀ နှစ်များကစပျစ်သီးကိုစတိုင်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းပုံစံဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည်။
ယခုနှင့်ထို့နောက်ဖက်ရှင် အဝတ်အထည်နှင့်အိမ်အလှဆင်မှုများကိုအထူးပြုသည့် Downtown Dutchtown ရှိပြန်လည်ရောင်းချသည့်ဆိုင်ဖြစ်သည်။
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ စျေးဆိုင်